Adobe Color wuxuu noqdaa mid si fudud loogu adeegsan karo giraangirta cusub | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka
Marar badan xitaa ma garanayno in deegaankeennu uusan ahayn mid si ku filan "looga fekeray" marka laga eego dhinaca marin u helka. Haddii aan tagno digital, Adobe wuxuu ku daray giraangir midab cusub oo laga heli karo Adobe Color.
Degelka Adobe sida qalab si loo abuuro midabada midabada leh iyo in khadadkaan aan kugula talinay mar uun. Hadda waxaa lagu cusboonaysiiyay ikhtiyaarrada marin u helka si ka wanaagsan si loo caawiyo kuwa naqshadeeyayaasha doonaya ee naqshadooda ay u noqon karto "mid la heli karo" sidoo kale.
Waxaan ka hadleynaa giraangiraha midabka cusub ee gudaha Adobe Color oo lagu garto helitaan iyadoo u oggolaaneysa naqshadeeyayaasha inay xaqiijiyaan in mowduucyada midabkoodu ay la jaan qaadayaan saddex nooc oo indha beelid midab ah: Deuteranopia, Protanopia iyo Tritanopia.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan shaaggan iyo muuqaalka cusub ee boggan si loo abuuro midabbo midab leh, waxay bixisaa aragti la moodo oo ah sida mawduuca uu ugu muuqan doono kuwa ay saameeyeen seddexdan nooc ee indha la'aanta midabka. Shaki la'aan, soojeedin dhan oo ay soo bandhigtay Adobe oo doonaysa inay ku soo biirto Maalintaan Helitaanka Adduunka.
Yaraanta aragtida midabku waxay ku dhacdaa 3-5% dadka adduunka. Markaad ku darto xasaasiyadda ka soo horjeedka, aragga oo xumaada da'da, iyo arrimo kale, waxaan ka hadlaynaa qayb daran oo dadka ka mid ah oo ka faa'iideysan kara marin u helka xagga naqshadeynta.
Tani Isla qalab Adobe Color ah ayaa kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho midabka midabka leh haddii aad ogaato inay jiraan waxoogaa hoosoocyo ah oo saameeya noocyadaas dadka ah aragtida caadiga ah ee qaybaha webka ee laga yaabo inay ku jiraan. Markaa iyada oo loo marayo gawaarida waxaan si dhakhso ah uga sameyn karnaa wax ka beddelid isla shabakadda.
Una Adobe maalmo kahor waxay cusbooneysiisay barnaamijyo badan de Cloud Cloud oo laxiriira fiidiyowga iyo dhawaqa. Ha moogaanin warka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Giraangir midab cusub oo la heli karo oo ku yaal Adobe Color loogu talagalay Maalinta Helitaanka Adduunka